Vaovao - Teknolojia 20 hananganana masinina saron-tava China Masinina famokarana maska
Masinina vokatra hotely sy kosmetika fanary
Cotton Puff & Golve fanaovana milina
Masinina vokatra fandidiana azo alefa
Masinina fanaovana saron-tava 2D
Masinina fanaovana saron-tava mandeha ho azy
Masinina saron-tava 3D
Masinina fanaovana maska ​​3D mandeha ho azy
Masinina mikraoba saron-tava hafa
Masinina saron-tarehy amin'ny tarehy
Ao anaty masinina fonosana saron-tava
Masinina fanamafisana ny saron-tava Earloop
Mamatotra masinina manao sarontava
Masinina vokatra tsy tenona hafa
Masinina fonosana saron-tava
Masinina fanaovana kitapo tsy misy tenona
Teknolojia 20 hananganana masinina saron-tava China Masoava Production Production UP UP
Manomboka amin'ny fandraisana fanomezana avy amin'ny firenena maro ka hatramin'ny fanomezana fitaovana ara-pahasalamana ho an'ny firenen-kafa. Ao anatin'ny fotoana fohy iray volana mahery, ny "iray ao anatin'ny iray" saron-tava sinoa dia taratry ny tanjaka mahery namboarina tany Chine ary mamelombelona ny hafainganan'ny famokarana fitaovana ara-pitsaboana.
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nisy ny pnemonia coronavirus vaovao teo amin'ny sehatra fitsikerana any Shina, ary firenena 20 mahery, anisan'izany i Japon, Korea Atsimo ary Pakistan, no namonjy azy ireo.
Hatramin'ny 2 martsa dia firenena 62 sy fikambanana iraisam-pirenena 7 no nanolotra sarontava, fitafiana miaro ary ireo fitaovana hafa ilaina maika hisorohana sy hifehezana ny valanaretina any Shina. Ny minisitry ny raharaham-bahiny Ma Zhaoxu dia nilaza fa: "Pakistan dia naka sarontava avy tamin'ny tahirin'ny hopitaly nasionaly ary nanolotra izany ho an'i Shina."
Taorian'ny ezaka iray volana mahery, miavaka ny voka-dratsin'ny fanoherana ny valanaretina sinoa. Tamin'ny faha-13, tsy nisy tranga vaovao voamarina tany amin'ny faritany 27, faritra sy tanàna mizaka tena, ka faritany 19, faritra mizaka tena ary tanàna tsy nanana tranga vaovao nandritra ny 14 andro nifanesy na mihoatra. Na ny valanaretina lehibe indrindra any Wuhan aza dia voamarina ho tarehimarika tokana nandritra ny telo andro misesy.
Androany, niatrika fiovana lehibe ny toe-trangan'aretina manerantany ary mavesatra ny raharaha. Ny pnemonia coronavirus vaovao any ivelan'i Shina dia misy trangana pnemonia voan'ny coronavirus vaovao, ary ny Vondron Eropeana dia nanjary ivon'ilay valanaretina pnemonia satro-boninahitra vaovao, hoy ireo. Ny pnemonia avon'ny coronavirus dia nambara fa hiditra amin'ny "emergency state" ary nanomboka 50 miliara dolara amerikana hiatrehana ilay valanaretina pnemonia satro-boninahitra vaovao.
Manoloana ny fielezan'ny valan'aretina manerantany dia nanome fanampiana ho an'i Korea Atsimo, Japon, Iran ary ireo firenena hafa ao anatin'ny fahaizany i Shina. Tsy vitan'ny fanomezana fanafody toy ny sarontava, fa koa nametaka tononkalo nanohina ny fon'ny olona.
Nilaza ny minisiteran'ny raharaham-bahiny Sina fa tokony hifanampy ny mpifanolo-bodirindrina manoloana ny olana sy ny fanamby. Tsy nametraka fepetra fanaraha-maso ny varotra maska ​​fanondranana sy ny akora i Sina.
Amin'izao fotoana izao, Italia dia nanao sonia fifanarahana fanondranana vokatra ara-pitsaboana amin'i Shina, ary nampanantena ny hanondrana sarontava 2 tapitrisa, akanjo miaro 200000 ary kitapo fitiliana 50000 ho any Italia i Italia.
Ny biraon'ny solontenan'ny varotra amerikana dia nanambara ihany koa tamin'ny faha-13 fa ny vokatra ara-pahasalamana sasany nafarana avy any Shina dia tsy ho tafiditra ao anatin'ny lisitry ny tarif, ao anatin'izany ny saron-tava azo anaovana, saron-tava fanary azo ampiasaina, fonony stethoscope azo atsipy ary fonony kiraro azo esorina.
Fotoana fandefasana: Mar-09-2021